Onjiniyela uMbumbi Blockstream ukudala supercomputer ku blockchain - Blockchain Izindaba
Ben Gorlick noJohnny Dilly ushiye Blockstream ithimba onjiniyela ukusebenza iphrojekthi abo endlalekile ikhompyutha ifu isixuku Machine. Gorlick umqondisi lobuchwepheshe, futhi Dilli iyinhloko uhlelo izakhiwo.
Onjiniyela bakholelwa ukuthi izinhlelo ngamafu kudingeka ngcono, futhi Isixuku Machine linikeza ikhambi blockchain. I-computer ifu endlalekile uzokwenza inqubo yokudala izinhlelo zokusebenza kunoma iyiphi blocker ngokushesha futhi eshibhile: “Yini sisebenzela kuzoshintsha imitsetfo leyengamele isofthiwe usuwakhiwe egijima,” Gorlick wathi ku ingxoxo Coindesk.
Le project ihlanganisa izinkampani eziningana ezisebusweni uhlu Fortune 500 izinkampani, kuhlanganise GE and Anthem. Okwamanje, abathuthukisi ukuhlola uhlelo lokusebenza nokuvinjelwa Ethereum.
Ngenxa owayeyilungu Blockstream, Ben Gorlik ubona inkinga yokuthi kunzima kakhulu ukusebenzisa imishini blockchains ukudala imikhiqizo kakhudlwana ngokusekelwe kubo. Echaza isimiso isimiso esisha, yena usitshela isicelo-ikhalenda. Ngokuvamile lakhelwe platform ifu njenge-Google Cloud noma wewebhu we-Amazon Services. Kodwa ngaso sonke isikhathi umsebenzisi esebenza, imali likhokhelwa okusuka kunjiniyela. Gorlick ukholelwa ukuthi kwalesi simiso “bottleneck”, okuholela eqolo.
Ukuphumelela Isixuku Machine kungenxa yokuthi noma yimuphi umsebenzi umsebenzisi is igqekezwe izingxenye eziningi bese kabusha inethiwekhi amadivayisi, ngalinye elikwazi ukwenza ukucubungula kwabo. Ngakho, isicelo iqala futhi ugijimela uhlelo, kodwa abasebenzisi ungaboshwa omunye umhlinzeki.
Futhi, abasebenzisi isicelo bazokwazi ukuthola umvuzo yokuqalisa uhlelo zonke izinhlobo amadivaysi: laptops, Smartphones kanye namadivayisi “Inthanethi zezinto”. I-computer isebenzisa umbono walokho okubizwa ngokuthi “eqinile inhlangano”, okuyinto Gorlick futhi Dilly ezidalwe Blockstream. Kusho ukuthi nakanjani ISIZINDA uyobhubhisa ikhodi efanele.
Ngesikhathi esifanayo, Ngokuzayo Isixuku Machine ezisekelwe isicelo onjiniyela Awudingi ngisho ukwazi izinhlelo: Isixuku App Studio ikuvumela ukudala izinhlelo zokusebenza usebenzisa i-interface isiqophi e hudula bese uyadedela Imodi.
“Ukubhala smart inkontileka umsindo okwesabisayo. Sidinga ukususa izithiyo”, Ben ukholelwa Gorlick.
Ngakho, ukwakha izivumelwano smart Ethereum unga ngaphandle kolwazi we nokuqina ulimi lokwakha izinhlelo. Futhi esikhathini esizayo isevisi uyokusekela nezinye izilimi izinhlelo, kuhlanganise Script bitcoin.
Blockchain Izindaba 04.07.2018
Thumela Previous:deVere Iqembu uqala cryptocurrency ukuhweba lokusebenza
Thumela Landelayo:Ngokwesibonelo, emazweni ahlukahlukene, amanani bitcoin ingahluka